Author Topic: နှစ်သက်မိသော သရော်စာများ (Read 38959 times)
« Reply #20 on: June 23, 2011, 11:07:47 AM »
မေးလ် ထဲကိုရောက်လာတာလေးပါ..ခေါင်းစဉ်နဲ့ မဆိုင်ရင်ေ၇ွှ့ ပေးကြပါ အကိုတို့ ရေ....
Facebook ၏အလှပဂေးများကိုလိုက်လံငမ်းမောကြည့်ရှုရာမှရရှိလာသောဓါတ်ပုံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို နောင်လာနောက်သားများအတုယူနိုင်ရန်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ - အသုံးအများဆုံးနည်းလေးကတော့ နှုတ်ခမ်းလေးကိုစူရင်စူ၊ ပါးလေးကိုဖောင်းရင်ဖောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် လျှာကလေးကိုတစ်လစ်တစ်လစ်လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ၃ခုလုံးပြိုင်လုပ်ချင်လဲရပါတယ်။ ပိုလှချင်သေးရင်တော့ လက်ညှိုးနဲ့ ပါး ဒါမှမဟုတ် နှုတ်ခမ်းကိုထောက်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ရိုးသားသယောင်ယောင် (သို့) အံသြသယောင်ယောင် (သို့) Feel တက်နေသယောင်ယောင်မျက်နှာပေးလုပ်ချင်လဲရပါတယ်။ စိတ်ကျေနပ်ပြီဆိုရင်တော့ Camera မီးကျွမ်းအောင်ရိုက်လို့ရပါပြီ။ ဒီရုပ်ဒီရည်နဲ့ ပုံ ၁၀၀ ရိုက်ရင် ၁ပုံတော့လှမှာပဲ။ အင်း၊ ကြိုက်တဲ့ပုံရပြီဆိုရင်တော့ မြန်မြန်သာ Upload လုပ်ပေတော့။ အစ်ကိုကာလသားတွေမြန်မြန်ငမ်းလို့ရအောင်။ - နောက်တစ်နည်းကတော့ ကိုင်းထူထူနဲ့မျက်မှန်၊ ဒါမှမဟုတ် မှန်မပါတဲ့မျက်မှန်တပ်ပြီးရိုက်နည်းပါပဲ။ ကိုင်းကအရောင်စုံဆိုရင်ပိုတောင်ကောင်းသေး။ ဘာကြောင့်ဒီနည်းကိုသုံးသင့်လဲဆိုရင် မျက်မှန်ကိုင်းကထူတော့ မျက်နှာပေါ်က တင်းတိပ်၊ ဝက်ခြံ၊ ကြက်ခြံတွေကို ဖုံးပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်။ ပြီးတော့ မျက်မှန်ကိုပဲ အာရုံရောက်နေကြတော့ ကိုယ်မလှတာလူသတိမထားမိဘူးပေါ့။ ဒါတောင်အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်တော့ မျက်နှာတစ်ဝက်လောက်ဖုံးတဲ့ နေကာမျက်မှန်ကြီးတွေတပ်ပြီးရိုက်လို့ရပါသေးတယ်။ အခြောက်ကြီးဆိုရင်တောင်လူသိမှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ ပျားလိုလို၊ ယင်ကောင်လိုလို၊ ပုတုန်းလိုလိုနဲ့ လူတောင်ရှိန်သေး။ - ပိုလှချင်ပါသေးတယ်ဆိုရင်တော့ ဟိုဂျပန်ကာတွန်းကားတွေထဲကလို မျက်ဆံကြီးကြီး အရောင်တောက်တောက်တွေနဲ့ မျက်ကပ်မှန်တွေတပ်ပြီးရိုက်လို့ရပါသေးတယ်။ လန်းလွန်းလို့ ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်တောင်မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီမျက်လုံးတွေကြိုက်တဲ့ကောင်လေးနဲ့တွေ့လို့ ရည်းစားရရင်တော့မပူပါနဲ့။ မျက်ကပ်မှန်ကို အိပ်တဲ့အချိန်ကျမှချွတ်ပေါ့။ အိပ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့သူလည်း မျက်လုံးကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ (တစ်ခြားစိတ်ဝင်စားစရာတွေရှိတာကိုး)။ - အော်၊ ပြီးတော့ မျက်လုံးကြီးကြီးနဲ့တော့လှချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မျက်ကပ်မှန်မတပ်ချင်ဖူးဆိုလဲ တစ်နည်းရှိသေးတယ်။ အိမ်မှာသကြားရှိတယ်ဟုတ်? အင်း၊ အဲဒီသကြားကို လက်ဘက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းလောက်ခပ်ပြီး စားပွဲပေါ်မှာတင်၊ ပြီးရင် ဘူးအလွတ်တစ်လုံးနဲ့ စောင့်နေ။ ခဏနေ ပုရွက်ဆိတ်တွေလာလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုဘူးနဲ့ဖမ်းပြီး တစ်နေ့တစ်ဘူးမှီဝဲဗျ။ ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ မသိဘူးလေ၊ လူကြီးတွေပြောတာက ပုရွက်ဆိတ်စားရင် မျက်လုံးပြူးတယ်ဆို။ - နောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ အိမ်မှာ မွှေးပွရုပ်တွေရှိရုံနဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ရမှာက ညဝတ်အင်္ကျီကိုဝတ်၊ ပြီးတော့ဆိုဖာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်၊ အရုပ်ကလေးကို ချစ်စဖွယ်ပိုက်ပြီး အိမ်ကလူတစ်ယောက်ယောက်ကို Camera ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ချစ်စရာ့အရွယ် နို့နံ့မစင်သေးတဲ့ကလေးမငယ်စတိုင် ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ သူများတွေလည်းဂုဏ်ယူလို့ရအောင် Facebook မှာတင်ဖို့မမေ့နဲ့အုံးနော်။ - တကယ်လို့ Cute ဖြစ်တာမကြိုက်ပဲ ပူစပ်ပူလောင် Hot & Sexy ကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံး Stocking တစ်ထည်ရှာပါ၊ အပေါက်တွေပါရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့အခုဝတ်နေတဲ့အင်္ကျီထက် ၄ ဆိုဒ်လောက်သေးတဲ့အင်္ကျီကိုရှာပါ။ အဲဒါတွေဝတ်ဆင်လိုက်ရင်တော့ မယ်စကြာဝဠာရှူံးလောက်တဲ့၊ ကိုယ့်မှာရှိနေမှန်းတောင်မသိငုပ်လျှိုးနေခဲ့တဲ့ ကျပ်ထုပ်တင်းရင်းနေတဲ့အလှတွေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်လည်း ဒီအလှတွေပေါ်အောင်လို့ Camera ကို အပေါ်ကနေချိန်ပြီးရိုက်ပါ။ ရှုခင်းကောင်းတာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမှန်ထဲကနေတစ်ဆင့် Angle ပေါင်းစုံကနေစမ်းပြီးရိုက်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ပုံကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီး ကိုယ်ကိုတိုင်တောင် မရိုးမရွဖြစ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ သင်ဟာနောက်ထပ်ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ကောက်ညှင်းထုပ်ဓါတ်ပုံ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွား ပြီဆိုတာ သိရှိလိုက်ပါတော့။ ပြီးတော့ဒီနေရာမှာယူတတ်ရင်ရမယ့်အခွင့်အရေးလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ Camera အစား Phone နဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်တာပါပဲ။ မှန်ထဲမှာရိုက်တာဆိုတော့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ သင့် Phone လဲပါလာမယ်လေ။ သင့်၏ တန်ဖိုးကြီးပြီး ဖန်ရှင်စုံပေသော iPhone 10Gs (သို့) HTC Superhero OMFG! (သို့) Sony Ericsson Zeperia Z20 (သို့) Nokia N-Gazillion အစရှိသောအမျိုးကောင်းသား/သမီး Handsetတို့ကိုအသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အလှနောက်ခံထားကာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမနာလိုအားကျကြောင်းငှာ ကြွားဝါပြသမည့်အရေး ဤနှယ်ကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးထူးကြီးအား အဘယ်မှာတွေ့ရပါညားအံ့။ ထို့ကြောင့်ဤအခွင့်အရေးထူးကြီးအား လက်မလွတ်ရလေအောင် အမိအရယူပါလေ။ - ဒီလိုအံ့မခန်းဓါတ်ပုံတွေရိုက်မယ်ဆိုရင် Setting ကောင်းကောင်းလိုပါတယ်။ Facebook မှာ popular ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကတော့ Photo studio၊ ပန်းခြံပေါင်းစုံ၊ အဆောက်အဦးများ၏အပေါ်ဆုံးထပ်၊ အင်တာနက်ဆိုင်၊ hotel & restaurants တွေမှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အခန်းထက်တောင်ကောင်းတဲ့ အဆင့်မှီအိမ်သာကြီးများ၊ ပြီးတော့ အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း အစရှိသဖြင့်ပါပါတယ်။ ကိုယ်ဥာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက် ဆန်းသစ်တီထွင်ရိုက်ကူးလို့ရတဲ့အတွက် အကျယ်တဝင့် မညွှန်ကြားတော့ပါဘူး။ - နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးလို့ Profile Picture တင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ photo frame၊ ဒါမှမဟုတ် စာလေးတွေ၊ အသည်းပုံလေးတွေမပါရင်မပြီးပါဘူး။ တွေ့ရတတ်တဲ့ စာလေးတွေကတော့ "ZOMG I’m sO fUCkiNg CuTE!!!!!1122@@", "I miss you so much that I'm posting my cute/revealing photos on Facebook", "I am so hot I'm jealous of myself", "Your boobs are smaller than mine bwaa haa haa" အစရှိသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်. အထက်ပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ Friends ရာ၊ ထောင်ချီပိုင်ဆိုင်တဲ့ Facebooker တစ်ယောက်အဖြစ်ကိုမကြာမီရောက်ရှိပါတော့မယ်။ အဲဒီ Friends တွေထဲမှာ ပုရိသတွေကတော့ 99.9999999999% ဆိုတာပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး (အဲဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာပဲ ဟာပဲ ဟာပဲ ဟာကို)။ ထပ်ပြီးဂုဏ်ယူစရာကတော့ သင်ဟာဒီပုရိသတွေရဲ့ comment တွေနဲ့ ချီးမြောက်မှုတွေကြားမှာ မျက်နှာပန်းပွင့်လန်းလာတော့မှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ။ အဲဒီလို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုတွေကို ကြိုတင်ခံစားလို့ရအောင် comment နမူနာလေးတွေကို ကျွန်တော့်ရဲ့မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့အတူ ဖေါ်ပြပေးပြီး ဒီ Guide ကိုနိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။ • "လန်းတယ်နော်" (“ဟုတ်၊ ကျေးဇူးနော်”) • "so beauty" (English လိုပြောပြီးအထင်ကြီးလဲခံချင်သေး၊ Grammar ကလဲမပိုင်) • "စားချင်စရာကြီး" (အတော်ပဲ toilet က flush လုပ်လို့မရတာနဲ့) • “ဘယ်လိုကြည်ကြည်အမြဲလှတယ်” (မြန်မာစာလုံးတောင်မှန်အောင်မပေါင်းဘူး) • သြော်--- သဘာဝတရားကို ပိုပြီးပြည့်စုံလှပသွားအောင် လှပနေသူပါလားနော် (“သဘာဝတရားကို အကျည်းတန်အောင် ပေါရဲသူပါလားနော်”) • _____ ရဲ့ပါးပေါ်က မှဲ. လေးဖြစ်ချင်လိုက်တာ (“ဟင့်အင်း၊ ကျွန်မကမှဲ့ရုပ်ဆိုးကြီးလိုချင်ဘူး”) • ကြည့်ကောင်းလို့ ______ ရဲ့ ပုံကို desktop မှာတင်ထားလိုက်ပြီ (“ရှင့် PC က Core i7 မဟုတ်ရင်တော့ sorry ပဲ) • BeeeeeeeeeeeeeeOoooooooooooooTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeFuuuuuuuuuuuuuuuuuuuLLLLLLLLLLLLLLLLLL!! (“Sorry but I don’t talk to people who have trouble spelling.”) ကဲတော်လောက်ပါပြီ၊ ဆက်ရေးလို့ကတော့ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါတောင်ဒီ comment တွေက တစ်ယောက်ထဲဆီကယူထားတာ၊ ဘယ်သူလဲဆိုရင်တော့ပြောပြဘူး Disclaimer: ဤဆောင်းပါးကိုမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ နာကျင်ထိခိုက်စေလိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အပျော်သဘောဖြင့်သာရည်ရွယ်ပါသည်။ တိုက်ဆိုင်မှုမရှိကခွင့်လွှတ်စေလိုပါသည်
« Reply #21 on: June 27, 2011, 08:57:12 AM »
(မော်ပီ ဆရာသိန်းနှင့် လုံးဝ အမျိုးမတော်ပါ) (နာမည်များတိုက်ဆိုင်သွားလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါရန်..)
(Credit to Than Htike Aung)
« Reply #22 on: July 07, 2011, 09:15:05 AM »
အခုရက်ပိုင်း ခတ်စားနေသာ သတင်းစာမှာပါသော်ကြော်ညာတစ်ပုဒ်
...............မငိုပါနဲ့တော့ သမီးလေး ဘီဘီကွေး(မအမခ-၀၀၀၀၀)..............
..............တစ်ဘာသာမှ အောင်မှတ်ရအောင်မဖြေနိုင်လည်း မနည်းပါဘူး.............
အောင်မှတ်မရလို့ နောက်နှစ်ကျရင် မောင်အောင်မှတ်နဲ့ပေးစားပါမယ်(ဤကား ပိုစ့်တင်သူ၏အာဘော်သက်သက်)
« Reply #23 on: July 15, 2011, 08:45:43 AM »
အင်တာနက်မှ လျှောက်သွားရင် တွေ့မိခဲ့ တဲ့ video ဖိုင်လေးပါ ဘာမှဝင်ပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းလွန်းပါတယ် ဗျာ...........
« Reply #24 on: August 24, 2011, 02:57:33 PM »
မေး- စာမေးပွဲဖြေရတော့မယ်နော်။ ဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီလဲ
ဖြေ- အချိန်မီ ဆရာ့ထဲကို ကိုယ့်ခုံနံပါတ်လေး ပါသွားအောင် ကျူရှင်လခ သွင်းနေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဆရာတွေ လိပ်စာကို စုဆောင်း နေပါတယ်။ ဒါမှလည်း စာမေးပွဲပြီးပြီးချင်း ကန်တော့လို့ ရအောင်ပါ။ ကန်တော့ဖို့ ပိုက်ဆံကိုတော့ ဟိုနေ့ကမှ အိမ်ကို လှမ်းပြီး ဖုန်းဆက် ပြောထားပါတယ်။ လောလောဆယ် စာတော့ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။
မေး-ဒါကနောက်ဆုံးနှစ်လည်းဖြစ် တယ် ဒီစာမေးပွဲအောင်ရင် ဘွဲ့လည်းရတော့မယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုခံစားရလဲ
ဖြေ-သိပ်ကိုဝမ်းနည်းပြီး ယူကြုံးမရဖြစ်မိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တကယ်လို့ ဘွဲ့ရခဲ့ရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့က တရားဝင် လိုင်စင်ရ အလုပ်လက်မဲ့ တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ အခုက ကျောင်းတက်နေတာဆိုတော့ ဘာပြောပြော ကျောင်းသားဘ၀ ဆိုတော့ အိမ်က ထောက်ပံ့ပေးနေဆဲပါ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းပြီးသွားရင်တော့ လုံးဝကို supply တွေ ပိတ်ကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့ အနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းတော်ကြီးကို လွမ်းတာတို့၊ သူငယ်ချင်းတွေကို တမ်းတတာတို့၊ ချစ်သူလေးကို ခွဲရမှာတို့ထက် သောက်သုံးမကျတဲ့ ကောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုပြီး ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။
မေး- ကျောင်းသားဘ၀ဆိုတာကလေ တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်တွေ ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒီတော့ မောင်လေးရဲ့ အနာဂတ်ကိုရော ဘယ်လိုစိတ်ကူးထားလဲ။ အမေရီကားမှာဆိုရင် University Graduate တွေဟာ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေတို့ ဘာတို့တွေတောင်ရောက်ကြတယ်လေ မောင်လေးတို့ရော။
ဖြေ- ဒါမျိုးစဉ်းစားဖို့ တော်တော်လေးကို ခက်ပါတယ်။ တစ်နေ့သင်လိုက်တဲ့ စာတွေကို တစ်နေ့စာတစ်နေ့ မှန်မှန်လုပ်ရအောင် မီးမလာလို့ စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် နေ့သင်တဲ့စာတွေကို ပြန်လုပ်ဖို့ ညကိုတော့ မီးလာပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ နိုင်ငံတော်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရာထူးမျိုးတွေကို စိတ်ကူးဖို့နေနေသာသာ လက်တစ်ဖက်က ထမင်းချိုင့်ကိုကိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်က ကားကလက်တန်းကို ကိုင်ထားပြီးစီးရတဲ့ မူဆယ်လားရှိုးဘက်က ၀က်တင်တဲ့ကားတွေလို ကျောင်းကားတွေကို နေ့တိုင်းစီးနင်းကျော်ဖြတ်နေရတာ အရင်ပြီးဆုံးစေချင်ပါတယ်။ ကျန်တာဘာကိုမှ စိတ်မကူးပါဘူး။ အသက်မပျောက်ဘဲ အိမ်ပြန်ရောက်လာရင် ကျေနပ်နေပါတယ်။
မေး- ကျောင်းသားဆိုတာက များသောအားဖြင့် အရပ်သားတွေနဲ့ ကွဲပြားတတ်တယ်လေ။ မောင်လေးရဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦးပုံစံကိုပြောပေးပါဦး။
ဖြေ-အရပ်သားနဲ့တော့ ကွာသွားတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ခေတ်ကလို ကွဲပြားခြားနားသွားတာ မဟုတ်ဘူး ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရပ်သားတော်တော်များများကတော့ မြို့တော်ကြီးတွေထဲမှာ နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေဆိုတာက များသောအားဖြင့် တောကြီးမျက်မဲလို နေရာတွေ မြို့ပြင်တွေ ကျေးလက်တွေမှာ နေရတာများတော့ အများကြီးကို ကွဲပြားသွားပါတယ်။ ဒီတော့ ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့တွေက အရပ်သားတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တော့လောက်အောင်ကို မိုက်ရိုင်းသွားကြတော့တာပေါ့။
မေး- အခုကိုယ်က ကျောင်းပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ သူများနိုင်ငံကလို ကျောင်းပြီးရင် သူတို့ဆီမှာ လာလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတာတို့ ဘာတို့ရှိနေပြီလား
ဖြေ- အခုထက်ထိတော့ အဲဒါမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟိုနေ့က ပါချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ကပ်ထားတာကတော့ ဒီကနေ ဘွဲ့ရသွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဗထူးဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းမှာ တက်ဖို့ခေါ်ထားတဲ့ စာတော့တွေ့ပါတယ်။ OTS လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါလောက်ပါပဲ၊ သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အလုပ်ရရေးမရရေးသည် ကျောင်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ကရော ပြီးတော့ အစိုးရပြန်တမ်းဝင်စာမေးပွဲလို့ ခေါ်တဲ့ PSC စာမေးပွဲအနေနဲ့ရော ကျောင်းသားတွေကို ဘွဲ့ရပြီးပြီးခြင်း ခန့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘွဲ့ရတာသည် အလုပ်ရဖို့ အထောက်အကူကောင်းတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ကို ကျောင်းပြီးပြီးချင်း အလုပ်တန်းရတာတို့ ဘာတို့ဆိုတာက လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အမျိုးနီးစပ်တော်နေသလား ဥပမာပြောရရင် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘကြီးဘုန်းကြီးနဲ့ကို ကိုယ်ကခင်နေရင်လောက်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ စောစောကပြောတဲ့ PSC စာမေးပွဲဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် ကံစမ်းမဲပေါ့နော်။ လူ ၁၂ ဦးစာခေါ်တယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့် ၁၀ ဦးလောက်က ဖြေဖြေ မဖြေဖြေ အလုပ်ရကြမှာဖြစ်ပြီးသားပါ။ ကျန်တဲ့ ၂ နေရာစာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘွဲ့ရ ပညာတတ် အယောက် ၅၀ လောက်က ကံစမ်းကြပါတယ်။
မေး- ကျောင်းမှာ ဆရာပြန်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသေးလား
ဖြေ- လုံးဝကိုမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ တကယ်ကို မရှိတာပါ။ မသိတဲ့သူတွေက မတတ်တဲ့သူတွေကို ပြန်သင်ပေးရတာလောက် စိတ်ကုန်စရာမရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က စာသင်တယ်ဆိုရင် စာဘဲသင်ချင်တာပါ။ ကြက်ဆူပင်စိုက်ရတာတို့၊ မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ရတာတို့၊ ဂိတ်ဂျူတီစောင့်ရတာတို့ မလုပ်ချင်ပါဘူး။
မေး- ကိုယ်ယူုထားတဲ့ မေဂျာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်ကို စိတ်ကူးနေပါသလား
ဖြေ-တချို့တွေကပြောကြပါတယ် ပညာစီးပွား ဆိုတာပေါ့။ ဒီနေ့ခေတ်ပညာရေးက စီးပွားရေးဆန်လာတယ်တဲ့။ အကောင်းမြင်တဲ့သူရှိသလို အဆိုးမြင်တဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဘာပြောပြောပေါ့ ပညာရေးမှာ ငွေကအဓိကဆိုတာတော့ အားလုံးကို သိစေချင်ပါတယ်။ ပြောရရင် ဆရာလူထုစိန်ဝင်း ပြောပြောနေကြပေါ့။ ပညာသင်တာ စဉ်းစားတတ်စေချင်လို့တဲ့ ဒါပေမယ့် စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတဲ့ ပညာ ဆိုတာကတော့ မူလတန်းကနေ ဒီနေ့အထိ အလွတ်တွေကျက်ပြီး အလွတ်တွေချရေးပြီး အောင်မြင်လာတာပါဘဲ။ အခုနေ ကျွန်တော့်ကို အလွတ်ကျက်ခဲ့တဲ့ စာတွေ ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ စာတွေကို ပြန်မေးကြည့်ပါ ကျွန်တော် မြန်မာလို တစ်လုံးမှ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ချရေးခိုင်းရင်တော့ ကောင်းကောင်းကို ရေးပြနိုင်ပါတယ်။
မေး- မကြာခင် နိုင်ငံတော်သစ်ကို တည်ဆောင်ကြတော့မယ်လေ။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကို့လူမျိုးအတွက်ပေါ့။
ဖြေ-ဘာမှမပြင်ဆင်ထားပါဘူး။ ထမင်းနပ်မှန်အောင်စားချင်ရင် ဒါမျိုးတွေ မမေးပါနဲ့လား။ တကယ်တော့ ဒါတွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ အလုပ်သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူဘဲ တက်တက်ပေါ့နော် ရပ်ကွက်ထဲက ပဲပြုတ်သည်တွေလဲ ပဲပြုတ်ဆက်ရောင်းကြမှာပဲ၊ ဆိုက်ကားဆရာတွေလည်း ဆိုက်ကားဆက်နင်းကြမှာပဲ။ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုလားကြီးကို ကုလားကြီးလို့ခေါ်ခေါ် မာမူကြီးလို့ခေါ်ခေါ် အရားကြီးလို့ခေါ်ခေါ် ကုလားက ကုလားပါပဲ။ ကျွန်တော်ဘာမှမပြင်ဆင်ထားပါဘူး။ ဒါတွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့ တပ်မတော်ကြီးရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိ အင်အားမတောင့်ဘဲနဲ့ အခြေအနေကို ကြိုတင်မသုံးသပ်ဘဲနဲ့ ၀င်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ပါတီငယ်လေးတွေကိုတော့ သနားပါတယ်။ စိတ်မကောင်းဘူး။ အခုကို အဖြေက ရှင်းနေပြီလေ ပါတီလေးတွေက ပိုက်ဆံမရှိလို့ ညည်းတွားနေကြချိန်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ စီးပွားရေလုပ်ငန်းရှင် အကြီးစားကြီးတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီတော့ ကျောင်းသားဆိုတာကရော ဘာများတတ်နိုင်နေဦးမှာလဲဗျာ။
ကျွန်တော်ကလည်း အခုလိုမေးမြန်းပေးတဲ့ ရိုက်စား အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်က အစ်မကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။﻿ ﻿
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပို့တဲ့ mail တစ်စောင်ထဲကပါ ဘယ်သူရေးတာလဲတော့ မသိပါဘူး.
« Last Edit: August 24, 2011, 02:59:14 PM by ko sai »
« Reply #25 on: August 26, 2011, 09:40:20 AM »
ဧရာဝတီ Blog မှာတွေ့ တာလေးပါ.. မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် ဖေ့စ်ဘွတ်တော်ရှိခဲ့လျှင်... တဲ. သဘောကျလို့ share လိုက်တာပါ...
« Reply #26 on: September 07, 2011, 12:38:34 AM »
: မှုန်ကုတ်နှင့် မညားခင်ကျားအရှင်ဖမ်းရမဲ့ ဒါးနားယားသိုင်းကွက်ကြီး
သောက်ခွက်ကပြောင်လွန်းချော်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေက အရွဲ့တိုက်ပြီး ပေးထားတဲ့ မှုန်ကုတ် (ခေါ်) စိုးကျော်ကျော်ရဲဟိန်းသူ သင်္ဘောကို သုံးနှစ်ဆက်တိုက် စီးပြီးပြန်လာတဲ့ သင်္ဘောသီးနုနုဖတ်ဖတ်လေး၊ သူ့ ကောင်မလေးနာမည်က နိုဝင်ဘာမေနှင်းဖြူ (ခေါ်) ခင်ကမ္ဘာကျော်၊ ငယ်ငယ်က ကမ္ဘာကျော်ရင် နာမည် ကြီးတယ်ဆိုလို့ ကမ္ဘာလုံးကို ခွ ခွ ကျော်နေတာနဲ့ ခင်ကမ္ဘာကျော် လို့ အိမ်နာမည်ပေးထားတာ၊ အခု ခင်ကမ္ဘာကျော်လေးလည်း ကိုnn ပြောခဲ့သလို အင်္ဂလန်ကို ဘင်သံနဲ့ သွားပြီး သုံးနှစ်တာ ပညာသင်ကြား၊ ဟိုမှာ မနေချင်လို့ မြန်မာပြည်ရောက်လာတဲ့အချိန် ဟိုးအရင်က ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာ ဆုံဖူးခဲ့တဲ့ မှုန်ကုတ် နဲ့ ပြန်တွေ့ပြီး ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ခင်ကမ္ဘာကျော် လဲ အကြောင်းမသိလို့ မှုန်ကုတ်ကို ချစ်ခဲ့မိတာပါ။
မှုန်ကုတ် က မျက်နှာရူး၊ ကျန်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်း တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ အကြောင်းလေး တွေနဲ့၊ တစ်ခါ မှုန်ကုတ် သူ့ဦးကြီး ခရီးဆောင်အိတ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ မြို့ထဲကိုလိုက်ပို့ရတယ် ဆိုင်ရောက် တော့ အရောင်းသမားက
“ဦးလေး သည်အိတ်က ရှယ်နော် ဦးလေး လွယ်သွားလို့လဲရတယ် ဘီးလေးတွေပါတော့ မလွယ်ချင်ရင်လဲ ဆွဲသွားလို့ရတယ်လေ”
“မဟုတ်ဘူးကွ ငါလိုချင်တာ ရိုးရိုးနဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်အိတ်မျိုးပဲလိုချင်တာ”
“ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့ သည်အိတ်က ခိုင်သလားမမေးနဲ့ အဲသည့်အပြင် ဘီးလေးတွေပါတော့ . . .”
“ဟေ့ကောင် ငါလိုချင်တာ အိတ်၊ တွန်းသွားဆွဲသွားမှာလဲမဟုတ်ဘူး၊ အဝတ်အစား နှစ်စုံသုံးစုံထည့်ပြီး လွယ်မှာ အဲသည်တော့ မင်းသိပ်ကြိုက်နေရင် မင်းဘီးတွေ မင်းအကုန်ဖြုတ်ယူထားလိုက်”
ဒါက မှုန်ကုတ်ရဲ့ ဦးကြီး၊ ရှိသေးတယ်။
မှုန်ကုတ်ရဲ့အစ်ကို နဲ့ အဖိုး ကတော့တစ်မျိုး တစ်နေ့တော့
“အခု ကျွန်တော် အရွယ်ရောက်နေပြီ ဖိုးဖိုး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တယ်၊ မိန်းခလေးချောချောလေး တွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်နဲ့ လျှောက်လည်ချင်တယ်၊ ကျွန်တော်လုပ်မှာတွေကို ဖိုးဖိုး မကျေနပ်လို့ ဆူမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်မှာမနေဘူး အခုဆင်းမယ်ဗျာ”
“ငါ့ကိုလည်း ခေါ်သွားပါမြေးရယ်၊ ဖိုးဖိုး နဲ့ မင်း တစ်စိတ်ထဲ တစ်ဝမ်းထဲပါဘဲ”
မှုန်ကုတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ပြောစရာတွေက အများကြီးပါ၊ ထားလိုက်ပါတော့၊ ခင်ကမ္ဘာကျော်လေး အကြောင်းဆက်ပြောပါဦးမယ်။
ချစ်သက်တမ်း သုံးလပြည့်တော့ ခင်ကမ္ဘာကျော် သူ့မာမီကို ပြောရတော့တာပေါ့၊ မာမီရယ်ရှာမပေးပါနဲ့ မီးမီးမှာ ချစ်သူရှိနေပြီ၊ မှုန်ကုတ်ရဲ့ယောက္ခမလောင်းကြီး ဒေါ်မျိုးမြင့်မြတ်သူ ဒေါသတကြီးဖြစ်ရပြီ၊ အင်္ဂလန်မှာ ဘင်သံနဲ့စာသင်လာတဲ့ သူတို့ရဲ့သမီးလေး ဘာမဟုတ်တဲ့ သင်္ဘောသီးကိုကြိုက်ရမလား ပေါ့လေ၊ နောက်ပြီး နေတဲ့ရပ်ကွက်ချင်းကလည်း အခြေအနေချင်းတူတာမဟုတ်ဘူးလေ၊ သူတို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်ကြီးက ဝင်းကြီးခြံကြီးတွေချည်း၊ ကန်ထရိုက်တိုက်ဘယ်လောက်ကျယ်ကျယ် ခိုအိမ်လို့ ထင်နေတဲ့ အနေအထား၊ သမက်တော်ရမည့် သူက ခိုအိမ်တောင်မှ ခိုအိမ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ နေနေရတာ၊ ဒါပေမဲ့ လေ ဒါပေမဲ့ပေါ့ သမီး ကြိုက်နေတော့လဲ နောက်မှ ပုံစံဝင်အောင်လုပ်ယူတော့မယ်ဆိုပြီး မှုန်ကုတ်ကို အကဲခတ်ဖို့ သူတို့ခြံကျယ်ကြီးကို လာခဲ့ဖို့ သမီးလေးနဲ့ အမှာတော်ပါးလိုက်ပါတော့တယ်။
မှုန်ကုတ် မှုန်ကုတ် အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာလို့သာ မိန်းမယူချင်လာတာ၊ နယူးတက်ခနော်လော်ဂျီ တွေနဲ့ စောင့်နေတဲ့ သူရဲ့ယောက္ခမကြီးလောင်းကြီး ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် ရင်တုန်စရာ ပွဲချင်းပြီး သိုင်းကွက် တွေကို မသိသေးတော့ သောက်ခွက်ပြောင်နိုင်သေးတာပေါ့လေ။
ရိုးသားတဲ့ ဖိုးသင်္ဘောသီးလေး ပုံဖမ်းပြီး ပိုးတွဲလုံချည်ကို ဒေါင့်တန်းဆွဲဝတ်၊ တုိုက်ပုံ၊ ကော်လံကတုံး ဘိတ်သိတ်ဆရာစတိုင်နဲ့ မြောက်ကြွ မြောက်ကြွ ချစ်သူလေးရဲ့ အိမ်ကြီးမဟာဆီကို ခခကြီးငှားစီးပြီး မြန်းခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒေါ်မျိုးမြင့်မြတ်သူ သူတို့ရဲ့ ခြံကြီးမဟာရှေု့ကို ဖုန်းဒိုင်းဖုန်းဒိုင်းနဲ့ ခခကားစုတ်ကြီး စီးပြီးရောက်လာတဲ့ မျက်နှာရူး မှုန်ကုတ်ကို ခြံတံခါးကြီးဖွင့်ပေးဖို့ ခြံစောင့်ဥယျာဉ်မှုး ဦးကိုကိုကြီးကို အမိန့်တော်ပါးလိုက်ပါတယ်၊ မှုန်ကုတ် ကားပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သွားအောင် လုံချည်ကိုပြင်ဝတ်ပါတယ်၊ ဒေါင့်တန်း ဆွဲကနေ ဒေါင့်တန်းဆွဲပဲဖြစ်သွားပါတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ကျေနပ်တော့သွားပါတယ်။
ခြံကြီးကအတော်ကျယ်တော့ ခြေလှမ်းတွေအများကြီးလျှောက်ပြီးဝင်ရပါတယ်၊ ရောက်ပါပြီ၊ တိုက်ကြီးမဟာ ရှေ့ရဲ့ သံပန်းတံခါးမကြီး၊ မှုန်ကုတ် တံခါးအဝမှာရပ်ရင်း အကဲခတ်လိုက်တော့ ဆိုဖာကြီးပေါ်မှာ မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်နေတဲ့ သူ၏ယောက္ခမလောင်းကြီးတို့စုံတွဲ၊ သူ့ချစ်ချစ်လေးက ဓါတ်ပုံတွေကြိုပြထားလို့ သိနေတာ၊ နောက်ပြီးလျှာကြီးတန်းလန်းနဲ့ အဲလ်ဇေးရှင်းခွေးကြီးက ဧည့်ခန်းဆီသွားမဲ့လမ်းမှာ ငုတ်တုတ်ကြီး၊ မှုန်ကုတ် ဒါကြီးတော့ ကျွတ်ပါတယ်၊ မျက်နှာကို အတတ်နိုင်ဆုံး အချိုသာဆုံးထားပြီး ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာနဲ့
“အန်တီ အန်တီ ခွေးကြီးက ကိုက်တတ်ပါသလားခင်ဗျာ”
“အော် ဟော် မောင်စိုးကျော်ကျော်ရဲဟိန်းသူ လား၊ အန်တီတို့လည်း သည်ကောင်ကြီး ကိုက်တတ်သလား မကိုက်တတ်သလား သိချင်နေတာကွဲ့ ဝယ်ထားတာ သုံးလေးရက်ရှိပဲသေးတယ်လေ၊ အခုတော့ မင်း အိမ်ကိုလာလည်တာနဲ့ စမ်းကြည့်ဖို့အတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်”
“ဟုတ် ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အန်တီ”
ဒေါ်မျိုးမြင့်မြတ်သူရဲ့ ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးထွဋ်ခေါင်နန်း မျက်ခုံးကြီးတွေ ပင့်တက်သွားပါ တော့တယ်၊ ဒါ ကျေးဇူးတင်စရာမှမဟုတ်တာလေ၊ ဒေါ်မျိုးမြင့်မြတ်သူကတော့ သမက်လောင်းလေးကို ဂွင်ရှိတုန်း ဆက်လက်ပြီး ငုတ်တုတ်ခံစေတော့ သိုင်းကွက်ကြီးတစ်ကွက်ကို ဆက်လွှတ်လိုက်ပါတယ်
“အမလေး အရပ်ကသာပုတာ နာမည်ကျတော့ ရှည်လျှားထွေပြားလှချည်လား”
အဖေ အမေ ပေးတဲ့နာမည်၊ အသားလွတ်ကြီး သားကိုလာဖဲ့နေတယ်၊ အရပ်ပုတယ်ဆိုတာကလည်း အော်ပု၊ အင်ပုမဟုတ်ဘူး၊ မွေးထဲကပုတာ၊ အခုလည်းပုမှာဘဲ၊ နောက်လည်းပုမှာဘဲ၊ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ မှုန်ကုတ် မေတ္တာမပျက်ပါဘူး၊ ချစ်ချစ်လေးရဲ့ မေမေလေ၊ နောက်ဆို ကိုယ့်မေမေ ဖြစ်တော့မှာ။
ဦးထွဋ်ခေါင်နန်းကတော့ စိတ်ပူလှပြီ၊ သမီးလေးကို မှုန်ကုတ်က အခုချက်ခြင်း ခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်တောင် သူတို့က ကကဖိုးပါပေးပြီး အဝတ်အစားတွေနဲ့ တစ်ခါထဲထည့်ပေးလိုက်ချင်တာ၊ ဟုတ်တယ်လေ အင်္ဂလန် မှာ ဖက်ရှင်ကျောင်းတက်လာသလား ထင်ရတယ်၊ ဝယ်လိုက်တဲ့အဝတ်အစားကလည်း ဘီဒိုကြီးလေးလုံး တောင်မလောက်၊ ဒါတင်လားမဟုတ်သေး၊ ဖိနပ်ကလည်း အရံတစ်ရာနီးနီးရှိတယ်၊ နှုတ်ခမ်းနီ မိတ်ကပ် လိုင်နာ ဖေရှယ်ဖုန်း ရှန်ပူး ဘာညာကွိကွတွေ မှန်တင်ခုံပေါ်မှာ အပြည့်၊ အဲဒါကိုမလောက်သေးလို့ သပ်သပ် ကို ရှိုးကေ့စ်ကြီးနဲ့ ကျပ်သပ်နေအောင်ထည့်ထားရတာ၊ သူတို့ခံနေရတဲ့ သည်ဒါဏ်ကြီးကို မိုက်မိုက်မဲမဲ အစားဝင်ခံမဲ့ သူငယ်လေးရှိတုန်း အဆင်ပြေပြေလေး ဖြစ်ချင်တယ်။
သူ့ တုန်းကလည်း ကြည့်ဦးလေ သူက ဒေါ်မျိုးမြင့်မြတ်သူကို လူကြီးတွေအလစ်မှာ ခိုးပြေးလာတာ၊ သူတို့ ပြေးတဲ့နေရာရောက်လာလို့ လေးဘီးသမားကို (ထိုစဉ်က လေးဘီးကားများမှာ အငှားကားများဖြစ်ပါသည်) ကားခထုတ်ပေးမယ်လုပ်တော့ သူ့ယောက္ခမလောင်း အဖွားကြီးက ပေးပြီးလွှတ်လိုက်တာတဲ့၊ အမှာတောင် ပါးလိုက်သေးတယ်၊ စိတ်မပူနဲ့၊ လိုက်မရှာဘူး၊ ဖုန်းဆက်ပါ၊ နောက်တစ်လကျော်လောက်မှ လူကြီးစုံရာနဲ့ လာ တောင်းတဲ့။
သမီးလေး ခင်ကမ္ဘာကျော်ကလည်း အမေတူသမီးလားမသိ၊ လှတာမလှတာ အပထား၊ အလှအပကတော့ အရမ်းကြိုက်၊ ဦးထွဋ်ခေါင်နန်း၊ မှုန်ကုတ်ကိုကြည့်ရင်း သည်ကောင်တော်တော်တုန်းတဲ့အကောင်ဘဲ၊ ခြေမြန်လက်မြန် ခိုးပြေးသွားပါတော့လားဟု စိတ်ထဲကတွေးနေ၏။
ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ပေးစားဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ဝတ္တရားအရ ဦးထွဋ်ခေါင်နန်း မှုန်ကုတ်ကို မေးခွန်း ကြီး သုံးခွန်းမေးရပါတော့တယ်၊
“မောင်ရင် မင်း သောက်တတ်လားကွ”
“ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ နဲနဲပါးပါးပါ ဝီစကီလောက်ပါဘဲ ခင်ဗျာ”
“အေးကွာ ကောင်းတာပေါ့ လူငယ်ဆိုတော့ သည်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့၊ လောင်းကစားရောကွ”
“ဂျပန်ရောက်တုန်းက ပါချင်းကိုးမှာ ဒေါ်လာသုံးရာကျော် မှတ်မှတ်ရရ ရှုံးဖူးပါတယ်ခင်ဗျာ မကောင်းမှန်း သိလို့ နားလိုက်ပါတယ်”
“အေးကွာ တော်တာပေါ့ လူငယ်ဆိုတော့ သည်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ ဒါနဲ့ မောင်ရင် မိန်းမကိစ္စရော”
“ဝါသနာနဲနဲ ပါ ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ A to Z ကို ကြောက်လို့ လုံးဝကင်းနေတာပါ”
“အေးကွာ ကောင်းတာပေါ့ လူငယ်ပေမဲ့”
ဒေါ်မျိုးမြင့်မြတ်သူ ဦးထွဋ်ခေါင်နန်းကို အသာလက်ကုတ်ပြီး နားခိုင်းလိုက်ပါတယ်၊ သမက်လောင်းနဲ့ ယောက္ခမအဖိုးကြီး လိုင်းကအတော်တူနေတယ်၊ သမီးကြီးယောက်ျား ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ တစ်ခြားစီ၊ သည် တစ်ခါ သူမအလှည့်
“သည်ခေတ်ကြီးက မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆို ဒါးနားယား ကို သိမှကွဲ့”
“ခင်ဗျာ ဘာကိုပြောတာပါလဲ မေမေ”
ဒေါ်မျိုးမြင့်မြတ်သူ သူမကို မှုန်ကုတ်က မေမေ ခေါ်လိုက်လို့ အတန်ငယ်တော့ ကျေနပ်သွား၏၊ သမက်ကြီး တုန်းက အန်တီ အန်တီနဲ့ တစ်အန်တီထဲ အန်တီနေလို့ အန်တောင်အန်ချင်နေခဲ့တာ၊ သည်ကောင်လေးက လူရိပ်လူကဲနပ်ပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒါပေမဲ့လေ သူမတို့ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကြီးမှာ ဒါးနားယားသိုင်းကွက်ကြီးမှ မပြနိုင်ရင် လူရာမဝင်ဘူးလေ၊ သည်တော့ သမက်လောင်းလေးကိုတော့ သဘောကျနေပေမဲ့ ဒါးနားယား သိုင်းကွက်ကြီးကို သိသွားအောင် တကွက်ပြီးတစ်ကွက်ပြရတော့မှာပေါ့၊
“ဒါး ဆိုတာ ထရိတ်ဒါးဟော်တယ်ကြီးမှာ စေ့စပ်ဖို့ပြောတာကွဲ့ အန်တီတို့က သိပ်လည်းအကျယ်ချဲ့ မနေ ချင်ပါဘူး၊ ဆွေမျိုးကလည်း သိပ်မများတော့ လူတစ်ထောင်လောက်ဆို တော်ပါပြီနော်”
မှုန်ကုတ်ဆိုတဲ့ငကြောင်ကလည်း စိတ်ထဲကနေတွက်တာ၊ လူတစ်ထောင်ကို ရေသန့်ဗူးဝေရင် ဘယ် လောက်ကုန်မယ်ဆိုတာကို တွက်နေတာ၊ သူက ဟော်တယ်မှာ ရေသန့်ဗူးလောက်ကိုသာ တောင်း သောက်ဖူးတာ၊ သူ့အတွက် နဲ့ မေကမ္ဘာအတွက် ချန်လိုက်ရင် နှစ်ဗူးတော့သက်သာသွားမယ်လို့ တွေးနေ သေးတယ်၊ ပြီးတော့မှ စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့
“ရပါတယ် မေမေ၊ သည်လောက်က အသေးအဖွဲပါ”
“နား ဆိုတာ ဆီဒိုးနားဟော်တယ်ကြီးမှာ သားနဲ့သမီး လက်ထပ်ကြမှာပေါ့ကွယ်၊ ဒါလည်း အန်တီတို့ လူအများကြီး မဖိတ်ချင်ပါဘူး အပိုတွေ၊ လူငါးထောင် လိုလိုပိုပိုခြောက်ထောင်လောက်ဆိုတော်ပါပြီ”
ရေသန့်ဗူး မှုန်ကုတ်ကလည်း အင်း မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့ ရေသန့်ဗူးနဲ့တင် မကောင်းတော့ဘူးလေ၊ သည်တော့ သူတို့နားက မင်္ဂလာဆောင်တွေလို ရေခဲမုန့် နဲ့ ဝေဖာနှစ်ချပ် ကျွေးဖို့ စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်၊ သူ့သူငယ်ချင်းတွေတုန်းကလိုဘဲ ခပ်ညံ့ညံ့ ရေခဲမုန့် ကို အော်ဒါမှာရင် ဘာမှမကျလောက်ဖူးတွေးပြီး
“အိုကေ အိုကေ မေမေ၊ သည်လောက်ကတော့ သား ကမ္ဘာတစ်ပတ် ပတ်လိုက်ရင်ရပါတယ်”
အားလုံးပေါင်း သိန်းသုံးရာကနေ သိန်းငါးရာနီးနီးကုန်မဲ့ ဒါးနားယားသိုင်းကွက်ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ကွက် ကို ထုတ်သုံးဖို့ ဒေါ်မျိုးမြင့်မြတ်သူ နောက်ထပ်သက်ပြင်းကိုချလိုက်ရင်း
“ဒါကနောက်ဆုံးပါကွယ်၊ ယားဆိုတာက အင်းယားလိပ်မှာ မိတ်ရင်းဆွေရင်းတွေကို ဒင်နာကျွေးဖို့ပါကွယ်၊ ဒါလည်း မဖိတ်မဖြစ် ဧည့်သည်လေးနှစ်ထောင်လောက်တော့ ဖိတ်မှ သင့်တော်မယ်လေ နော်”
သည်တစ်ခါ ဝေဖာမှုန်ကုတ် စဉ်းစားရပြီ၊ ဒင်နာဆိုတာ သူတစ်ခါမှ စားဖူးတာမဟုတ်၊ အင်းယားလိပ်ဆိုတာ ကလည်း သူကြားသာကြားဖူးတာ တစ်ခါမှ ရောက်ဖူးတာမဟုတ်၊ ဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဆိုတာတော့ သူနဲနဲ သိပါတယ်၊ သည်တော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ကုန်ကုန်ခမ်းခမ်း ဒင်နာမှာ မုန့်ဖက်ထုပ်ဝေဖို့ စိတ်ကူးလိုက်တယ်၊ မုန့်ဖက်ထုပ်ကိုတော့ သူ့အမျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်ထုပ်ခိုင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်ပြီး
“မေမေ ဒင်နာကို သားကိုယ်တိုင် စီစဉ်လိုက်ပါမယ်” ဟူသတည်း။
ဤတွင် ရေသန့်ဗူးမှုန်ကုတ် နှင့် မညားခင်ကကျားအရှင်ဖမ်းရမဲ့ ဒါးနားယားသိုင်းကွက်ကြီး နားပါတယ်၊ မရယ်ရဘူး ပြောတဲ့လူတွေ မိန်းမ၊ ယောက်ျား၊ ဗေလုဝ၊ ဒေါ်ဂွက်ထော်နဲ့ ညားကြပါစေသတည်း။
ဝန်ခံချက်၊ ဖတ်ဖူးသော စာတချို့မှ အတွေးလေးများကိုလည်း ယူထားပါတယ်။
စာရေးသူ - kokogyie's fb
« Reply #27 on: September 07, 2011, 08:09:54 AM »
မ ရီ ရ ဘူး
ဗေလုဝ ကိုယူမှ ရီရဦးမယ်
ဒေါက်တာလမ်း ရေးထားတာ မဟုတ်လို့ ပြောတာ ကိုဂျီးလမ်း ရေးရင်အားပေးမှာပါ (ဒီလိုလဲ ပြန်ပင့်သွားဦးမှ) ဟီဟီ အဲ kokogyieဆိုတာ ကက တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော် ဟုတ်ရင်အကြောင်းပြန်
ကိုလမ်း ရေ မတွေ့တာကြာပီနေားD
« Last Edit: September 07, 2011, 08:13:07 AM by dardardar »
« Reply #28 on: September 07, 2011, 08:21:31 AM »
Quote from: dardardar on September 07, 2011, 08:09:54 AM
ရယ်ချင်လို့ ဗေလုဝ ယူရအုန်းမယ်
ဗေလုဝ ဆိုတာ ဟို ပိန်ပိန်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ကို ပြောတာလား
ဟိုက ခြေသလုံးသေးသေးနဲ့ ရယ်ချိန်မရမှာစိုးတယ်
« Reply #29 on: September 07, 2011, 03:21:40 PM »
ငရဲပြည် နဲ့ နတ်ပြည် အထူးအမြန်ရထားလမ်းကြီး
တစ်နေ့မှာ နတ်ပြည်ကသိကြားမင်းနဲ့ ငရဲပြည်ကငရဲမင်းတို့ တွေ့ဆုံပြီး နတ်ပြည်နဲ့ ငရဲပြည်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးမယ့် အထူးအမြန်ရထားလမ်းကြီး တစ်လမ်းအမြန်ဖောက်ဖို့ သဘောတူသတဲ့..။ ကြားဘူတာအနေနဲ့
လူ့ပြည်ကိုသတ်မှတ်ပြီး နှစ်ဖက်ရဲ့ လမ်းဖောက်လုပ်ရေးရဲ့ ဆုံမှတ်ကလည်း
နတ်ပြည်ကဖောက်လာတဲ့လမ်းပိုင်း နှစ်ဖက်ဟာ အလယ်ဖြစ်တဲ့
ဒီလိုနဲ့ ငရဲမင်းကြီးလည်း အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ ဖောက်လိုက်တာ တစ်ပါတ်လောက်ကြာတော့ လူ့ပြည်ရောက်ဖို့ လမ်းခုလတ်ကို ရောက်လာရောတဲ့..။
“ငါ့ဖက်ကတောင် ဒီလောက်ပြီးနေပြီဆိုတော့ နတ်ပြည်ဖက်ကလည်း တော်တော်ပြီးလောက်ပြီ”
“သူတို့ဖက်က ပြီးတယ်မပြီးတယ်က သူတို့အပိုင်းပဲ..။ ကိုယ့်ဖက်ကတော့ တာဝန်ကျေဖို့လိုတယ်”
ငရဲမင်းကြီးရဲ့ ရထားလမ်းကြီးက သတ်မှတ်ဆုံရပ်ဖြစ်တဲ့
လူ့ပြည်ကိုရောက်လာပါရော…။ ဒီတော့ ငရဲမင်းကြီးလည်း အပေါ်ကိုတစ်ခါ
ထပ်မော့ကြည့်တော့ နတ်ပြည်ဖက်က ဘာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိတယ်မှ မတွေ့တော့
“ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့ သိကြားမင်းဆိုတဲ့ကောင်..အလကားရေသာခိုနေတယ်.. မထူးဘူး..တစ်ခါတည်းဖောက်လက်စနဲ့ ငါကပဲဒီလမ်းကို
ဆက်ဖောက်လိုက်တဲ့ ရထားလမ်းကြီးလည်း နောက်နှစ်ပါတ်လောက်ကြတော့
နတ်ပြည်တံခါးဝထိ ရောက်လေရော ဆိုပဲ…။
ဒါနဲ့ ငရဲမင်းကြီးလည်း သိကြားမင်းကိုတွေ့ပြီး ပွမ်တော့တာပေါ့…။
“ခင်ဗျားကြီးကပြောတော့ တစ်မျိုး.. လုပ်တော့တစ်မျိုး..။ ခုပေးမယ်ပြောပြီး အချိန်ဆွဲနေတာ.. နှစ်တွေလည်းမနဲတော့ဘူး… ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်…”
ဒီတော့ သိကြားမင်းက လေသံအေးလေးနဲ့ပြန်ဖြေရှင်းပါတယ်..။
“အင်း…ခင်ဗျားပြောတော့လည်း ခံရတော့မှာပဲဗျ..။ မတတ်နိုင်ဘူးလေဗျာ..။
အင်ဂျင်နီယာတို့၊ဆောက်လုပ်ရေးအရာရှိတို့၊ကန်ထရိုက်တို့ ဆိုတာ သေရင်ခင်ဗျားဆီပဲ ရောက်တာကလား..။ ကျူပ်ဆီမှာ အဲလိုကောင်တွေမရှိတော့